Mucaaridka dowlada Bartamaha Afrika oo diiday wadahadal • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Mucaaridka dowlada Bartamaha Afrika oo diiday wadahadal
Mucaaridka dowlada Bartamaha Afrika oo diiday wadahadal
Isbaheysiga Seleka ee Mucaaridka wadankaasi Bartamaha Afrika ayaa ku gacan-seeray baaq uga yimid Midowga Afrika oo ahaa inay wadahadal iyo waan waan nabadeed la sameeyaan dowlada uu hogaamiyo Madaxweyne François Bozize.
Midowga Afrika ayaa sidoo kale ugu baaqay xoogaga Mucaaridka inay hakiyaan weerarka ay kusoo qaadayaan magaalada caasimada ah ee Bangui.
Mucaaridka ayaa sheegay in nabad lagu gaari karo oo kaliya haduu xilka isaga dego Madaxweyne François Bozize, ayagoo sheegay inuu Madaxweyne hada kahor balanqaadyo badan oo uu sameeyey uu ka baxay.
Madaxweyne François Bozize ayaa asagu sheegay inuu ogol yahay in si shuruud la’aan ah wadahadal ulla yeesho xoogaga kasoo horjeeda oo hada gacanta ku dhigay inta badan magaalooyinka wadankaasi Bartamaha Afrika.
Xoogaga mucaaridka ayaa hada usoo dhaw magaalada Caasimada ah ee Bangui, ayadoo halkaasi laga dareemayo barakaca shacabka, dowlada ayaa caasimada kusoo rogtay bandow dhaqan galay maalinimadii shalay (Isniin)